ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Fairbanks, AK လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီအနီး
တတ်နိုင်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Fairbanks, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီး alaska လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 888-200-3292 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ယင်ကောင်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်. စတိဗ် Cass အဆိုအရ, Gulfstream မှာဆက်သွယ်ရေး၏ဒုတိယဥက္ကဌ, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏စစ်မှန်သောအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်အချိန်နှင့်အခါသင်အချိန်ကုန်သက်သာချွေတာဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျပိုက်ဆံကယ်တင်. high-ပျံသန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုပ်အမှုဆောင်သို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုင်ပြီးတစ်ဦးချင်းအဖြစ်, သင်၏အချိန်သင့်ရဲ့အရေးအပါဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်.
စတိဗ် Cass နောက်ထပ်သင်စီးပွားဖြစ်ပျံသန်းသည့်အခါကပြောပါတယ်, သင်လေကြောင်းလိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းရန်သင့်အချိန်ဇယားကို adjust. Fairbanks Alaska ရှိငှားပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်နှင့်အတူ, လေကြောင်းလိုင်းသင်တို့အဘို့က၎င်း၏အချိန်ဇယားကိုညှိ. ထို့ကြောင့်, သင်အလိုရှိသောအခါသင်ပျံသန်းဦးမည်. သငျသညျထွက်သွားသင့်တယ်သောအခါလေကြောင်းလိုင်း dictate မည်မဟုတ်.
တချို့ကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ခရီး. အဆိုပါ Gulfstream G650 ကျော်၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းရှိပါတယ် 900 km / h. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှား Fairbanks Alaska လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဦးတည်ရာမှာပိုမိုမြန်ဆန်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်. မြေပြင်ပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမမလိုအပ်သောစောင့်ဆိုင်းစရာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်တာရှည်စီတန်းအပေါ်အချိန်မဖြုန်းပါလိမ့်မယ်, စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့.
တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ဂျက်လေယာဉ်ဟာအဓိကလေဆိပ်တစ်ခုကြီးမားထွက်ပြေးသွားတဲ့မလိုအပ်ပါဘူး. ဒါဟာအသေးပြေးလမ်းအပြင်ဘက်ထွက်ပျံသန်းနိုင်သည်. အဲဒီမှာအဓိကသူတွေကိုထက်အများကြီးအသေးစားလေဆိပ်ဖြစ်ကြပြီးကအသေးစားလေဆိပ်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်. ထိုကွောငျ့, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုလျင်မြန်စွာချွတ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျပုဂ္ဂလိကပျံသန်းသည့်အခါ, သငျသညျအဓိကလေဆိပ်များပိတ်ဆို့မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားမည်မဟုတ်.
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Fly အဆင့်မြင့်သလား
ဟုတ်ကဲ့, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားပျံသန်း, ဒီထက်အသွားအလာလည်းမရှိဘယ်မှာ. တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်မှတက်ပျံသန်းနိုင်သည် 45,000 ပေ. ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်လေကြောင်းလိုင်းပျံသန်းနိုင်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်ကမိုဃ်းကောင်းကင်၏သိပ်သည်းခြင်းဧရိယာထဲကဖြစ်ပါတယ်, ထိုကွောငျ့, ကပိုမိုမြန်ဆန်ခရီးလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်.
အမျိုးသားစီးပွားရေးလေကြောင်းအစည်းအရုံးအတွက်စစ်တမ်းတစ်ခုထွက်သယ်ဆောင် 2009. စစ်တမ်း၏ဖြေဆိုသူရဲ့အဆိုအရ, စီးပွားဖြစ်ပျံနေဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားလျော့ကျစေပါတယ် 40% အားဖြင့်ပုဂ္ဂလိက Boost ကပျံသန်းနေစဉ်အတွင်း 20%. ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရီးသွားလာနေစဉ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကလွယ်ကူစေ privacy နဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏သာယာအဆင်ပြေမှုများသည်.
ပုဂ္ဂလိကပျံသန်းအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနှင့်လုံခြုံ. ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမြင့်မားအဆင်ပြေ အဘယ်သူမျှမည TSA သို့မဟုတ်ရှည်လျား check-in လိုင်းများ. သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်းအများအပြားဇိမ်ခံပစ္စည်းမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်သင်ကသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှာပိုမိုမြန်ဆန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအကြှနျုပျကိုအနီးရှိနောက်ဆုံးမိနစ်ဗလာခြေထောက်လေယာဉ်တင်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေသင့်တယ် Fairbanks Alaska.
Fairbanks အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သုံးခုအနောက်တောင်ဘက်မိုင် Fairbanks ၏ဗဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရိုင်တည်ရှိသောအစိုးရပိုင်အများပြည်သူအသုံးပြုလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်, Alaska ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်၏ Fairbanks မြောက်အမေရိကစတား Borough တစ်မြို့
Fairbanks, ဝိန်း Fort Wainwright, Ester, မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း, နှစ်ဦးကမြစ်ချောင်းများ, Eielson လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, Salcha, Nenana, Minto, အန်ဒါဆင်, ရှင်းလင်းသော, Healy, ရိုး, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လမ်းဆုံ, http://www.dot.state.ak.us/faiiap/index.shtml